ကက်ဖိန်း သုံးစွဲခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » ကက်ဖိန်း သုံးစွဲခြင်း
Posted by ခင်ခ on Aug 15, 2012 in Health & Fitness | 14 comments
ကက်ဖိန်းစွဲခြင်းသည် ကက်ဖိန်းဓာတ်ပါသော ကော်ဖီ၊လဘက်ရည်တို့ကို စွဲစွဲလမ်းလမ်းအားထား သောက်လေ့ ရှိခြင်းဖြစ်သည်။ ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည် သည် တစ်ကမ္ဘာလုံး အများစု နေ့စဉ်သုံးစွဲနေသော စားသောက်ကုန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဝါး(Drug) တစ်မျိုးဟူ၍လည်း စာရင်းဝင်နေသည်။ ကက်ဖိန်း အစွမ်းမှာ ကိုယ်ထဲရောက်သွားလျှင် နိုးနိုးကြားကြား ဖြစ်လာပြီးတွေးသောစိတ်ကူးပုံတွင် သဲသဲကွဲကွဲဖြစ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ကက်ဖိန်းတွင်လှုံ့ဆော်သော အက်ဒရီနာလင် ဓာတ်များ၏ အစွမ်းဖြစ်သည်။
သို့သော် ကက်ဖိန်းသည် ကြာမြင့်စွာမှီဝဲကျင့်ရှိသွားလျှင် မှန်မှန်မသုံးစွဲပါက နေမထိထိုင်မသာ ဖြစ်ရလေ့ရှိသည်။ ကက်ဖိန်း မသုံးစွဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်လေ့ရှိသည်ကို သတိမထားမိကြပေ။ ကက်ဖိန်းကို များများစားသောက်ခဲ့ပြီး လုံးဝမသောက်ပါ ဘူးဆိုပြီး တိကနဲဖြတ်လိုက်လျှင် ထိုသို့ ဖြစ်တတ်လေ့ရှိသည်။ ဖြစ်တတ်သည့်လက္ခဏာအများစုမှာ ခေါင်းကိုက်တာရယ်၊ မလှုပ်ချင်မကိုင်ချင်ဖြစ်တာရယ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေတာရယ်၊ တချို့ဆို ပျို့တာ၊ အော်ကလီဆန်တာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျ တုတ်ကွေးဖြစ်ချင်သလိုတောင် တွေ့ရပါတယ်လို့ ဂျွန်ဟော့ပကင်းစ်တက္ကသိုလ်ဆေးသိပံ္ပမှ ဇီဝဗေဒနှင့် အမူအကျင့်ဆိုင်ရာ စိတ္တဗေဒ နှင့် အာရုံကြောသိပ္ပံဆိုင်ရာ ပါမောက္ခဒေါက်တာရိုလန်ဂရစ်ဖစ်( Roland Griffith ) ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ကက်ဖိန်းစွဲလန်းမှု့ကို ဖြတ်တောက်လိုက်လျှင် ကသိကအောက်ဖြစ်သော လက္ခဏာမှာ ပထမရက်နှင့်ဒုတိယရက်တို့တွင် အခံရခက်ပြီး တစ်ပတ်ခန့်ကြာလျှင် ပျောက်ကင်းသွားနိုင်သည်ဟုသိရပါသည်။ သောက်နေကြကော်ဖီမသောက်ရလို့ ခေါင်းကိုက်လာတယ်ဆိုပြီး အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးများကို သောက်လိုက်တယ်၊ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးထဲက အက်စီဒရင်း ( Excedrine ) တို့၊ အနာစင် ( Anacin ) တို့ မှာကက်ဖိန်းပါနေပါတယ်၊ တစ်ခါသောက်ရင် ၁၀၀ ကနေ ၁၅၀ မီလီဂရမ်အတွင်း ပါလေ့ရှိပါတယ်၊ ထိုဆေးများနှင့် ကက်ဖိန်းပါဝင်မှု နှို်င်းယှဉ်လျှင် ကော်ဖီတခွက်၌ ကက်ဖိန်း ၈၅ မီလီဂရမ်သာပါကြောင်း တွေ့ရပါတယ်၊အခုနောက်ပိုင်း ကက်ဖိန်းမပါသော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများလည်း ထုတ်လုပ်ရောင်းချလာပြီဖြစ်၍ ဆေးအမယ်အညွန်းများ ဖတ်ကြည့်သင့်ပါသည်။ အချို့ အချိုရည်များတွင်လည်း ကက်ဖိန်း ပါဝင်တတ် ပါတယ်၊ သံဘူးတစ်ဘူး၌ ကက်ဖိန်းဓာတ် ၃၃ မှ ၆၇ မီလီထိပါလေ့ရှိ၏။ ချောကလက်ပြားများတွင် ၁၅ မီလီ ဂရမ်မျှ ပါရှိတတ်၏။ ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းဆေး၌ ဆေးတစ်ပြားတွင် ၂၀၀ မီလီဂရမ်နှင့် အထက်ပါရှိတတ်ပါသည်။ အချို့ အအေးမိနှာ စေးပျောက်ဆေးများတွင်လည်း ကက်ဖိန်းအနည်းငယ်ပါတတ်ပါသည်။
ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည်ဟာ တစ်နေ့ သုံးခွက်ထက်ပိုမသောက်သင့်ကြောင်း ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်ရဲ့ ကျန်းမာသုတ မှာဆိုထားပါတယ်၊ ကော်ဖီမှာ Purine alkaloid တွေပါဝင်ပြီး များများသောက်ရင် Caffeine ဓာတ်တွေဟာ ဆီးကျောက် တည်ခြင်းကို အားပေးကြောင်းပြောထားတာတွေ့ရ ပါတယ်။
ကက်ဖိန်းအလွန်အကျွံသောက်ခြင်းသည် သွေးပေါင်ချိန်ကိုတက်စေပါတယ်။ ဂေါက်လို့ခေါ်တဲ့ ရိုးဆက်ရောင်ရမ်းနာ ရှိသူများသည် ကော်ဖီ(ကက်ဖိန်း) မသောက်သုံးသင့်ကြောင်းသိရပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်၊ ကော်ဖီ၊ ကိုလာနဲ့ အမြုပ်ထ တဲ့အချိုရည်တွေမှာ ကက်ဖိန်းပါပြီး သူတို့ဟာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အကျိုးအာနိသင်ထက်မြက်တဲ့ အာဟာရစုပ်ယူမှု့ကို နှောင့်ယှက်ရုံမက သူတို့ရဲ့လှုံဆော်တတ်တဲ့ အစွမ်းသတ္တိဟာ စိုးရိမ်သောကကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါတယ်။ ဆေးကို ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည်နှင့်သောက်ခြင်းသည် ဆေး၏အကျိုးအာနိသင်ကို ကိုယ်ခန္ဓာမှစုတ်ယူနိုင်မှု တွင်အဟန့်အတားဖြစ်စေ ပါတယ်။ သည်းခြေကျောက်တည်သူများ ကော်ဖီသောက်သုံးခြင်းဖြတ်သောက်သင့်ပြီး ဆေးဘက်ဝင် ချာမိုမိုင်း လဘက် ရည်ဟာ ပိုသင့်လျော်ပါတယ်။ အစာမကြေဖြစ်နေသူများ ကဖင်းဓာတ်ဟာ အစာမကြေခြင်းကိုပိုဖြစ်စေလို့ ကော်ဖီ၊ လဘက်ရည်နဲ့ ချောကလက်တွေကို မစားသုံးသင့်ကြောင်း ဖတ်ဖူးတဲ့စာပေစုများမှ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
ကော်ဖီသုံးခွက်က ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းပေမဲ့၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတို့ ကိုလာတို့သောက်တဲ့နေဆို လျှော့သောက်သင့်တယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီနေ့အတွက် ကက်ဖိန်းဓာတ်တွေများနေမှာမို့ပါ။
ကော်ဖီကြိုက်တဲ့ မွန်မွန့်အတွက်တော့ မှတ်သားစရာပို့စ်တစ်ခုပါပဲ။ ဟိုတလောက ကိုထူးဆန်းရဲ့ ပို့စ်ကို ဖတ်ပြီးကတည်းက ကော်ဖီဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ အခုထက်ထိတော့ မအောင်မြင်သေးပါကြောင်း…
ကော်ဖီရဲ့ ကောင်းကျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေအတွက်ပေါ့ ကင်ဆာဆဲလ်တွေကို ဟန်တားပေးတယ်လေ၊ ဖြတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး ချိန်ဆသောက်သင့်တာပါ တန်ဆေး လွန်ဘေးပေါ့ မွန်မွန်ရေ။
ကဖိန်းပါတဲ့..ဖျော်ရည်တွေ..ယူအက်စ်မှာ.. ကလေးတွေပေးမသောက်တဲ့အကြောင်း.. သိပ်မကြာခင်ကပဲ.. တင်ပေးဖူးတယ်..
ကဖိန်းမပါတဲ့.. ဆဲဗန်းအပ်ပ် ပဲသောက်ရတာ..
ပါတီ..မွေးနေ့.. အလှူလုပ်ရင်လည်း.. သတိထားကြပါတယ်..။
သူကြီးကလည်း အဲဒါလေး လင့်ထဲ့ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမှာဘဲနော်။ ကျွန်တော်ဖတ်ဖူးလိုက်တယ်။
By Vee Enne, eHow Contributor
What Are the Effects of Caffeine on Children? thumbnail
Caffeine, the drug found in coffee, soda, iced tea and chocolate, affects the central nervous system of children. Small doses may increase their ability to concentrate, but in large doses, taken regularly, it can have harmful effects, including addiction. Bone mass may be affected by the mineral loss that caffeine causes. The substitution of caffeinated beverages for nutritious foods and beverages affects the overall health of the child. Caffeinated beverages can also affect the overall health and behavior of children.
Read more: What Are the Effects of Caffeine on Children? | eHow.com http://www.ehow.com/about_5084868_effects-caffeine-children.html#ixzz23bOuCZbO
ကော်ဖီ = အကြိုက်ဆုံးအရာ (၁)
ဆေးလိပ် = အကြိုက်ဆုံးအရာ (၂)
ကိုလာ = အကြိုက်ဆုံးအရာ (၃)
တကယ်တော့ ကျုပ်က ကာဖိန်းဆွဲနေသူပါလား…
ကောင်းပါ၏ ကောင်းပါ၏ ကာဖိန်းဆွဲသူ ကြောင်ဝတုတ်ရေ။
လ္ဘက်ရည် ကို တနေ့ ၂ ခွက် လောက် သောက်ဖြစ်တယ်။
ကျနော် လည်း ကေဖိန်း စွဲသူ တယောက် ဖြစ်နေပြီ ပေါ့။
ဒါနဲ့ ချောကလက် စားရင် ကလေးငယ်တွေ အတွက် ဥာဏ်ကောင်းတယ် လို့ ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူး လားလို့။
ချောကလက်လဲ ကေဖိန်း ပါတယ် ဆို တော့
သေသေချာချာ တော့ မသိဘူးနော်။
ကဖင်းဓာတ် နဲ့ adrenaline ဆက်စပ်ပုံကို ကျောင်းတုန်းက သင်ဖူး၊ကျက်ဖူးပေမယ့်
ကျွန်တော်နဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်နေတာ
ကျုပ်လဲ တစ်နေ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်တော့ သောက်ဖြစ်တာပေါ့
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ သိပ်မဆိုးလောက်ပါဘူးနော ကိုခင်ခရေ
ခေါင်းကိုက်လာရင်ကော်ဖီသောက် အိပ်ချင်ပြေကော်ဖီသောက် ဗိုက်ဆာရင်ကော်ဖီသောက် ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကော်ဖီသောက်။ ခက်တာဘဲ။ မသောက်ရရင် မနေနိုင်တော့ဝူး။ ဖြတ်အုံးမှပါ ဆရာခ ရေ။ ကျန်းမာရေး အသိပညာပေးပို့စ်တွေ မှန်မှန် တင်ပေးနေတာ ကျေးဇူးပါ။
နေ့တိုင်းအလုပ်က ပြန်လို့ အိမ်ရောက်ရင် တီဗွီလေးကို ကြည့် ရင်းရေနွေးကြမ်းသောက် နေကျဗျ။